खानेकुरा कसरी पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ? | सुदुरपश्चिम खबर
खानेकुरा कसरी पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ?
खाना विभिन्न तरीकाले पकाइन्छ । कुनै खाना तारेर त कुनै उसिनेर पकाइन्छ । कुनै ग्रील गरिन्छ त कुनै हल्का फ्राई गरेर पकाइन्छ । खाना पकाउने तरीका पनि आ–आफ्नै हुन्छ ।
विभिन्न तरीकाले पकाउदा पनि कहिलेकाही जानेर वा नजानेर हामी खानामा भएको सम्पूर्ण पोषण तत्व सरक्षित गर्नमा असफल हुने गर्छौ । परिणामस्वरुप, स्वास्थ्यवर्दक तरीकाले खाना पकाउँदा पकाउँदै पनि ती खानेकुरामा भएको आवश्यक पोषण तत्व ग्रहण गर्नमा हामी असर्मथ हुन्छौ । यसको पछाडी दुईटा कारण मुख्य मानिन्छन् । कि त हामी खानालाई धेरै पकाउँछौ, या त काच्चै राख्छौ ।
भिटामिन बी, सी, फोलेट लगायतको पोषण तत्व वाफ वा तातोमा बढी संवेदनशील हुन्छ, जसका कारण त्यसमा भएका आवश्यक तत्व क्रमश कम हुँदै जान्छ । खानामा भएका पोषण तत्व कम हुनुमा पकाउने समयावधी तथा आगोको रापले पनि धेरै प्रभाव पार्दछ । जबकी कम समयमा खाना पकाउने तरीका, तापक्रम तथा पानीको मात्राले पनि खानामा भएको पौष्टिक तत्वलाई संरक्षित गर्न निकै ठूलो भूमिका खेल्छ ।
यस हिसाबले भन्नु पर्दा हरिया सागसब्जी पकाउने सबै भन्दा राम्रो उपाय भनेको उसिन्नु हो । साजसब्जलाई उसिनेर पकाउदा यस्ता खानेकुरा छिटो पाक्नुका साथै यसमा भएका पोषणतत्व समेत नष्ट हुन पाउँदैन ।
खानामा पौष्टिक तत्वलाई कायम राख्न सागसब्जी तथा फललाई उचित तरीकाले काट्नु पर्छ । सागसब्जी वा तरकारीलाई ससाना टुक्रा बनाएर काट्दा त्यसमा भएका पौष्टिक तत्व नष्ट हुने सम्भावना धेरै हुने गर्छ ।
त्यस्तै, सागसब्जीलाई काटेपछि पानीमा डुबाउनले पनि कतिपय खानेकुरामा भएका पौष्टिक तत्व पानीमा घुलेर नष्ट हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ । त्यस्तै, सलाद तयार पार्दा खानेबेलामा मात्र तयार पार्नु पर्छ र हावाको सम्पर्कमा नआओस् भन्नका लागि राम्ररी छचोप्नु पर्छ ।
खाना पकाउनु अघि र पकाउँदा खानामा रहेको पोषण तत्वलाई नष्ट हुन नदिन पनि यी कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ ।मानिसहरु सोच्छन्, उमोलेको तथा स्टिम गरिएको खानेकुरामात्र स्वस्थकर हुन्छ ।
जबकी उमालेकै खानेकुरामा थोरै मात्र फ्याट वा चिल्लो मिसाउनाले पनि खानामा भएको पौष्टिक तत्व अझै बढ्ने गर्छ । फ्याटले खानाबाट मिल्ने पोषण अवशोषित गर्नमा शरीरलाई सहायता प्रदान गर्दछ । यसले खानाको स्वाद बढाउन समेत निकै मद्दत गर्दछ ।
ब्रोकाउली, बन्दा आदी तरकारी काच्चै खानु शरीरका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यसमा मोयोसिनेज नामक एन्जाइम हुन्छ जसले व्याक्टेरिया तथा इन्फेक्सन रोक्नमा मद्दत गर्छ । जबकी यी खानेकुरालाई पकाउदा यसमा भएका एन्जाइम नष्ट हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
खाना पकाउँदा हामी प्रायः पानीको प्रयोग गर्छौ । जबकी कुनै पनि हरिया सागसब्जीलाई धेरै बेर उमाल्नु हुँदैन । यसले खानामा भएको पोषण तत्व हराउन सक्छ । सागसब्जीमा पाइने पोषण तत्वलाई सुरक्षित राख्नका लागि पकाउँदा थोरै पानीको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
ब्रोकाउली, पालुङ्गो लगायतका सागसब्जीमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइन्छ । खाना पकाउँदै गर्दा यस्ता खानेकुरामा भिटामिन सी, कागती, वा अन्य कुनै अमिलो पर्दाथ मिसाउनाले आइरन सोस्न मद्दत मिल्छ । त्यस्तै, कागती, सुन्तला आदीले शरीरमा पोषण तत्व अवशोषित गर्न मद्दत गर्छ ।
जतिसक्दो ताजा खानेकुरा खाने बानी गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म राखेको खाना वा वासी खानाबाट पोषण तत्व क्रमश कम हुँदै जाने गर्छ । जसका खाना खानु र नखानु लगभग एउटै जस्तो हुनपुग्छ । त्यसैले, खानालाई सकेसम्म पकाउना साथ खाँदा राम्रो मानिन्छ ।
जिरो फिगर बनाउने बनाउने १० टिप्स !
बेदकोट नगरपालिकामा प्लम्बिङ्ग तालिम शुरु